UThixo Uza Kukhulula Uluntu Esebenzisa UMesiya
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUruund IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
UThixo Uza Kulukhulula Uluntu
UThixo wathembisa uAbraham othembekileyo ukuba ‘imbewu’ ekwaprofetwa ngayo yayiza kuphuma kwinzala yakhe. Abantu bazo “zonke iintlanga” babeza kusikelelwa ngaloo mbewu. (Genesis 22:18) Ekuhambeni kwexesha umzukulwana ka-Abraham, uYakobi, wafudukela eYiputa, apho intsapho yakhe yakhula yaba luhlanga lukaSirayeli wamandulo.
EYiputa, uFaro okhohlakeleyo wawakhobokisa amaSirayeli de uThixo wamisela umprofeti uMoses, owakhokela olo hlanga xa lwaluphuma kwelo lizwe, ngommangaliso esahlula phakathi amanzi oLwandle Olubomvu. Emva koko, uThixo wanika amaSirayeli imithetho, eyayiquka iMithetho Elishumi, eyayiza kuwakhokela ize iwakhusele. Loo mithetho yachaza iminikelo yokuxolelwa kwezono. Ephefumlelwe nguThixo, uMoses waxelela amaSirayeli ukuba uThixo wayeza kuwathumelela omnye umprofeti. Loo mprofeti wayeza kuba ‘yimbewu’ eyayithenjisiwe.
Kwiminyaka engaphezu kweyi-400 kamva, uThixo wathembisa uKumkani uDavide ukuba lowo uzayo, ‘imbewu’ ekwaprofetwa ngayo e-Eden, wayeza kuba ngumlawuli wobukumkani obabuza kubakho ngonaphakade. Lowo yayiza kuba nguMesiya, uMhlanguli owamiselwa nguThixo ukuba asindise uluntu aze abuyisele iParadesi emhlabeni.
Esebenzisa uDavide nabanye abaprofeti, ngokuthe ngcembe uThixo wathetha okuninzi ngoMesiya. Bathi wayeza kuthobeka, abe nobubele, yaye xa elawula, indlala, okungekho sikweni neemfazwe ziya kuphela. Lonke uluntu luya kuhlalisana ngoxolo, nkqu nezilwanyana. Ukugula, iintlungu nokufa—ezazingeyonjongo kaThixo—aziyi kubakho, yaye abafileyo baya kuvuswa.
Esebenzisa umprofeti uMika, uThixo wathi uMesiya wayeza kuzalelwa eBhetelehem, waza waprofeta nangoDaniyeli esithi wayeza kubulawa. Kodwa uThixo wayeza kumvusa aze ammisele njengoKumkani wasezulwini. Kwakhona uDaniyeli waprofeta esithi, ekugqibeleni uBukumkani obungoMesiya babuza kubasusa bonke oorhulumente abakhoyo buze bona bume ngonaphakade. Ngaba ngokwenene uMesiya wafika njengoko kwakuprofetiwe?
—Lithatyathwe kwiGenesis isahluko 22-50, nakwiEksodus, kwiDuteronomi, kweyesi-2 kaSamuweli, kwiNdumiso, kuIsaya, kuDaniyeli, kuMika nakuZekariya 9:9.
IGAMA LIKATHIXO ELINGCWELE
Igama elithi Yehova liqala ukuvela eBhayibhileni kwiGenesis 2:4. Eli gama livela izihlandlo eziyi-7 000 kwimibhalo-ngqangi yolwimi lwamandulo yeZibhalo Ezingcwele. Intsingiselo yalo—“Ubangela Kubekho”—isiqinisekisa ukuba uThixo uya kuyiphumeza injongo yakhe yaye uya kukwenza oko akuthembisileyo.
Text Iimpapasho onokuzikhuphela IMBONISELO Oktobha 2013 | Ithetha Ngantoni IBhayibhile?